I-pancreatitis Beetroot > Ukudla ngesifo sikashukela
I-Beetroot nejusi kusuka kuyo nge-pancreatitis
Ukulandela isidlo kuyinto ebalulekile, ngaphandle kwayo akunakwenzeka ukuba uthole izifo zohlelo lokugaya ukudla. I-pancreatitis nayo ihlukile - ukuvuvukala kwamanyikwe. Ukudla kusho ukungabandakanywa kwaleyo mikhiqizo engathinta kabi isimo sezempilo, kanye nokufakwa kokudla kwemikhiqizo okuzosiza ukubuyisa nokubuyisela ukusebenza okujwayelekile komzimba. Namuhla, ochwepheshe abaningi ngokwengeziwe bayakubona lokho i-beetroot ene-pancreatitis ingasinciphisa kakhulu isimo sesiguli futhi inesandla ekululameni okusheshayo.
Kungenzeka ukuthi i-beetroot nge-pancreatitis?
Ama-beet angasetshenziselwa i-pancreatitis, ngoba inomphumela omuhle kuma-pancreas. Ngezinhloso zokwelapha, zombili izithombo zezimpande namaqabunga asetshenzisiwe. Namuhla kunezinhlobo eziningi ezahluka ngesimo, umbala futhi zinempahla ehlukile. Kodwa-ke, izindawo zokuphilisa zalezi zakhiwo azithinteki.
Nge-pancreatitis, ama-beet awusizo kunoma yiluphi uhlobo. Ijusi ivuselela ukukhishwa kwejusi ye-pancreatic. Ngefomu elibilisiwe, iguqula izinqubo ze-metabolic, ithuthukisa ukuhamba kwamathumbu namathumbu. Ijusi elisha liqukethe inani elikhulu lamavithamini noshukela, eliqinisa umzimba, likhuphule amandla, kanye namandla okubuyisela umzimba. IGruel ne-beetroot ecubuziwe esusa inqubo yokuvuvukala.
I-Beetroot ku-pancreatitis eyingozi
IBeetroot iqukethe izithako eziningi ezisebenzayo ezidambisa ukuvuvukala. I-beetroot puree entsha ilusizo ngokukhethekile ekunciphiseni inqubo yokuvuvukala. Umphumela olindelekile utholakala ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwama-polysaccharides, ama-organic acid, amavithamini.
Ama-polysaccharides ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi aphulwe kalula yisenzo sejusi yesisu ngokukhishwa kwezakhi namandla. Ucwaningo lwembula imisebenzi ehlukahlukene yemvelo, ikakhulukazi, i-antibiotic, i-antiviral, anti-inflammatory, antitumor, antidote.
Ama-organic acid anezindawo ezinama-acid, ngendlela kasawoti noma ngefomu lamahhala aqukethe ukwakheka kwejusi yeseli. Bandisa ukukhishwa kwamathe, ama-pancreas kanye nejusi yesisu, banikeza izinga elidingekayo le-acidity. Ngenxa yalokhu, ukuhamba kwamathumbu kukhuphuka, ukuqina kuyasuswa, futhi izinqubo zokubola emathunjini zivinjelwe.
Amavithamini ayizingxenye zezinto eziphilayo ezisebenza ngesakhiwo samakhemikhali ahlukahlukene abandakanyeka ezinqubweni ze-metabolic nokwakhiwa kwama-enzyme. Bandisa inani le-pancreatin elikhiqizwayo, lingathinti kuphela imisebenzi yesisu namanyikwe, kodwa futhi likhulisa amandla omzimba wonke. Bandisa amandla ama-capillaries, bathuthukisa ukwakheka kwamaselula, okuthinta kahle umsebenzi wazo zonke izitho nezinhlelo.
IBeetroot ifaka nezinto zamakhemikhali ezenza inqubo ezenzeka emzimbeni zisebenze emzimbeni, isebenze ama-enzymes, zibambe iqhaza kwi-hormonal metabolism, futhi zibambe iqhaza ohlelweni lokuphefumula kwezicubu.
I-Beetroot in pancreatitis engapheli
Kwi-pancreatitis engapheli, ama-beetinize enza inqubo ye-metabolic ivikeleke ukukhula kwezinqubo zokuvuvukala, futhi avimbele ukwanda kokubuyela emuva. Lo mphumela ungatholakala ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kuma-beet ama-polysaccharides anjenge-camellia, mucus, izinto ze-pectin.
Izinsini zi-colloidal translucent izinto ezinamathela zezinto ezahlukahlukene zamakhemikhali nemvelaphi. Zi-soluble kakhulu emanzini futhi azincibiliki etshwaleni. Ngenxa yalezi zakhiwo, zisebenza njengama-emulsifiers. Yenza umsebenzi wokuvikela: unciphise ukumuncwa ubuthi nezidakamizwa kusuka emathunjini, okwandisa umphumela wazo.
Ama-Slimes ayizinhlanganisela zamahhala ze-nitrojeni ezinomphumela wokuthambisa futhi wokumboza. Zisetshenziselwa ukuvikela ulwelwesi lwama-mucous, yenza umsebenzi wesitho se-glandular kanye ne-parenchymal usebenze.
Izinto ze-Pectin ziyingxenye ye-ejenti ye-bondellular bonding, isondele ezinsini nasezinjeni. Lapho kukhona ama-organic acid noshukela, bakha ama-jellies anezakhiwo zokungenisa kanye nemiphumela yokulwa nokuvuvukala. Umuthi we-gelatinous uvamisa ukwakheka kwejusi ye-pancreatic, futhi futhi ubophe ubuthi, obunomthelela ekuqothulweni kwawo emzimbeni (yenza njengama-sorbents). Thuthukisa ukugaya, usize ukususa i-cholesterol eyeqile emzimbeni.
I-Beetroot ekwandiseni i-pancreatitis
IBeetroot iyasiza ekwandiseni i-pancreatitis, ngoba inenani eliphakeme lokudla okunempilo lokucindezela okuncane esiswini namanyikwe. Lokhu kutholakala ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwama-polysaccharides. Kulokhu, ama-polysaccharides predominate, amunzwa kalula futhi asetshenziswa ngumzimba: ama-monosaccharides, ama-disaccharides. Kungcono ukusebenzisa izinhlobo zamabhungane ezinombala omnyama, ngoba ziqukethe uginindela omnandi kakhulu, ogcwele izithako ezisebenzayo. Yizakhiwo ezinemibala ezinikeza izakhiwo zokupholisa ama-beets futhi zibalule ukubaluleka kwako ekudleni kokudla. Kuyadingeka ukukhetha izitshalo zezimpande ezinempilo, ezihlanzekile, ngaphandle kokulimazeka.
Ukudla kweBeetroot kwe-pancreatitis
Nge-pancreatitis, ungasebenzisa izitsha ezahlukahlukene ngokususelwa kuma-beet. Okulandelayo izindlela zokupheka ezithandwa kakhulu.
Ama-Beets afakwe ukhilimu omuncu noma usoso
Cwecwa amabhulethi, ubilise uthathe izicucu, amashubhu noma ingubo. Ukufudumala ngamafutha, engeza u-anyanisi osikiwe, ukhilimu omuncu noma ukhilimu omuncu usoso, imizuzu cishe engu-15. Ngaphambi kokusebenzisa, inkathi ngamafutha bese ufafaza ngamakhambi.
Cwebezela izimbotshana eziphekwe ku-peel, uthathe izingcezu, engeza umhluzi, imajarini kanye no-rub. Thela semolina (1-2 wezipuni ngama-gramu ayi-100-150 ama-beet). Vala isivalo, vumela ukupheka uhhafu. Ngokuvuselela njalo, ulethe ukulungela, kuphole esimeni esifudumele, engeza iqanda elingavuthiwe, inkathi ukunambitha ngoshukela nosawoti. Amafomu asikiwe. Ungangeza ushizi we-cottage shizi ocwengekile. Esikhundleni semolina, ungasebenzisa ufulawa kakolweni oshibhile. Ama-cutlets asikiwe afakwa kufulawa noma kuma-breadcrumbs, gazinga nhlangothi zombili. Sebenzisa ukhilimu omuncu.
Sika isithombo kanye nama-beet ngama-strips amade amancanyana, usawoti bese ushiya imizuzu engama-30 ukuya kwengama-40. Khama ujusi ongabonakala emifino enosawoti. Okwamanje, usike u-anyanisi emasongweni asezingeni, uncibilike ibhotela kanye gazinga kuze kube nsundu yegolide, vumela upholile. Isizini isithombo kanye beet nge ingxube anyanisi othosiwe kanye ne-oyela, engeza ujusi kalamula, imbewu sesame.
Isaladi yeBraised neBeetroot
Geza isithombo nama-beet. Bilisa ama-beet emanzini anosawoti kuze kufike ithenda. Geza isithombo, ikhasi, uthathe izingcezu. Fudumeza ipani lokuthosa ngamafutha zemifino, uthele isithombo esisikiwe, usawoti bese ugcoba nesosi soya. Mboza bese ubila kuze kuthambe ngokuphelele.
Cwecwa amabhele abilisiwe, uthathe izingcezu ezinciphile. Cola u-anyanisi oluhlaza, ucwengele upelepele obomvu kusuka imbewu, usike ube yimichilo emincane.
Hlanganisa i-radish ye-stewed nge-beet ebilisiwe, u-anyanisi oqoshiwe, upelepele, upholile kancane bese ubeka endishini yesaladi.
Ama-beet abilisiwe nge-pancreatitis
Ama-beet abilisiwe angadliwa ngokusilika, noma ngokwenza amazambane abunjiwe. Ungangeza futhi ekwakhiweni kwezitsha ezahlukahlukene. Phakathi kwabantu abalandela ukudla, i-beetroot puree isungulwe kahle.
I-Beets ibilisiwe, ipholile futhi ihlolwe. Ama-beet aselungile asulwa nge-grater futhi ayoliswe ukunambitha. Kunconywa ukuvuthwa ngosawoti omuncu kasawoti noma ibhotela (imifino, noma ukhilimu).
Isaladi yeBeetroot nge-pancreatitis
Ama-beet (1 pc.) Kufanele agezwe futhi abhakwe kuhhavini. Ipholile, ikhasi, uthathe ama-cubes amancane. Ubilise amazambane (ama-5 ama-pcs.) "Kumayunifomu abo", apholile, amakhasi bese uwasika abe ama-cubes amancane. Amazambane nama-beet kufanele acishe abe ngosayizi ofanayo lapho kusikiwe. Hlambulula iparsley emanzini afudumele, nquma fake.
Hlanganisa ama-beet namazambane no-parsley, inkathi ngosawoti, i-sesame noma uwoyela we-olive. Hlanganisa konke kahle bese udlulisela endishini yesaladi. Hlobisa nge-parsley noma dill.
I-Beetroot kanye izaqathi ze-pancreatitis
I-Carrot neBeet Casserole
Lungisa izaqathe kanye nama-beetle asikwe ama-cutlets, u hlanganise ne-cottage shizi, ogcotshwe ukhilimu omuncu noshukela. Beka le ngxube eshidini lokubhaka, elinamafutha futhi lifafazwe ngama-breadcrumbs, ufafaze ingaphezulu ngamasoftcrumbs, dizzle ngamafutha ubhake. Yidla ngo-ukhilimu omuncu.
I-Beet tops nge-pancreatitis
Izihloko ze-Beet zinezakhiwo ezizuzisayo. Ibuyisela umsebenzi wamathumbu, iqinise ukukhiqizwa kwejusi ye-pancreatic, futhi inciphise ukuvuvukala. Faka isicelo somhlobiso, njengengxenye yamasaladi.
Isaladi yeBeetroot eneTopers
Geza izimbotshana, upheke kuze kuthambe. Ipholile, amakhasi, uthathe izingcezu ezacile. Geza amazambane, ubilise “umfaniswano wabo”, upholile, ukhothe izingcezu. Cwecwa u-anyanisi, uthathe izindandatho ezimbili ezothile, gazinga kuze kube nsundu yegolide ku isipuni samafutha yemifino. Sika izingqimba ze-beet zibe yizicucu ezincane, uhlanganise namabhungathi, amazambane kanye no-anyanisi ocolile. Isizini ngosawoti kanye namafutha zemifino. Hlanganisa kahle bese ubeka endishini yesaladi.
Isobho se-Beetroot se-pancreatitis
Isobho lamazambane neBeetroot
Cwecwa bese ugeza izimbiza namazambane, uthele amanzi abandayo ezitsheni ezihlukile bese upheka kuze kuphekwe. Hlanza umhluzi we-beetroot, uhlukanise amazambane. Sula amazambane abilisiwe kanye nama-beet ngokwahlukana. Hlanganisa amazambane abunjiwe, thela umhluzi nobisi oluhlanganisiwe, engeza usawoti bese ubilisa futhi. Ngaphambi kokukhonza, inkathi ngebhotela ekheniwe kanye ne-yolk. Ungangeza ijusi le-isanqante.
Ijusi leBeetroot le-pancreatitis
I-pancreatitis Beetroot ngempumelelo ikakhulukazi ngesimo ijusi. Inezakhiwo eziwusizo, iqukethe inani elikhulu lezinto ezisebenzayo ngokusebenza.
Ijusi lingathathwa ngendlela yalo emsulwa, noma lihlanjululwe ngamanzi ngesilinganiso esingu-1: 1. Kunconywa ukuphuza isipuni kathathu ngosuku, ngaphambi kokudla
Ama-beet awathinta kanjani amanyikwe
Ama-Beets anezindawo eziningi, asiza:
buyisela umsebenzi we-pancreatic,
shintsha izinqubo zomzimba ezijwayelekile,
Nge-pancreatitis, lo mkhiqizo unomphumela we-laxative ne-diuretic. Kepha, kanye nokuhle, kungaba nomphumela omubi emzimbeni.
Kukhona ifayibha eningi empandeni, ethinta kabi amanyikwe namathumbu. Ukusetshenziswa ngokweqile kwemifino kungaphazamisa inqubo yokugaya ukudla.
Yimaphi amavithamini atholakala kuma-beet
Kumifino ethandwa ngabantu abaningi, kunezinto ezimbalwa ezisebenzayo umuntu azidingayo:
Kanye namavithamini amaningi kanye nama-asidi:
antioxidants C no-E,
IBeetroot futhi iqukethe usawoti wamaminerali, amaprotheni, ama-carbohydrate, i-fructose, inani elincane le-sucrose, i-organic acid.
Kufanele kuqashelwe ukuthi odokotela babeka imifino njengomkhiqizo wokudla. Ilusizo kwabadala nakubantwana, kepha ungayisebenzisi kabi.
Ukusetshenziswa kwama-beet for pancreatitis
Lesi sifo siholela ekungasebenzi kahle esibindini kanye nasemiphungeni ye-bile, ukungondleki kahle, izinkinga zezifo zamapheshana esiswini. Kunobuhlungu obukhulu endaweni yohlangothi lwesobunxele, ngaphansi kwezimbambo.
Ukudla kungavusa usizi olukhulu kakhulu. Imvamisa, iziguli zibuzwa ukuthi kungenzeka yini ukuthi kudliwe ama-beet nge-pancreatic pancreatitis.
Odokotela beluleka abantu abanalesi sifo ukuthi balandele indlela ekhethekile yokudla. Ukudla okunamafutha, okunamafutha akufakiwe, inani lamaswidi kanye nezinongo ngesikhathi sokulashwa kuncishisiwe. Ukusetshenziswa kwemifino yezimpande akuvinjelwe ekuxolelweni kwesifo.
Ngingazidla nini izindebe ezinalesi sifo?
Uma kungekho buhlungu obukhulu, isiguli sivunyelwe ukudla inani elincane lomkhiqizo abilisiwe. Ama-beet kufanele angezwe kwimenyu kancane kancane, alandele ukusabela komzimba. Qala ngesipuni ngosuku, kancane kancane ukhulisa inani libe ngama-gramu ayi-100.
Izitsha ezijwayelekile eziqukethe lo imifino azivunyelwe i-pancreatitis, kepha ama-beet abilisiwe kanye nejusi kuwo akuvunyelwe ukudliwa ngaphansi kwezimo eziningi.
Kubalulekile ukuqaphela ukusabela komzimba, uma kungekho khona ukuphazamiseka, imifino ingashiywa ekudleni.
I-beetroot ivunyelwe ngaluphi uhlobo
Isitshalo sezimpande sivunyelwe ukudla kuphela ngendlela ephekiwe, kuyilapho kufanele siphekwe amahora amabili. Ubhaxa obomvu buyacasula isisu. Ngesikhathi sokulungiselela, uviniga kanye namanye ama-asidi akufanele kufakwe emanzini. Ngakho-ke abomama bayakuthanda ukwenza njalo ukuze imifino ingalahlekelwa umbala wayo. Kodwa lokhu kuthinta kabi isiguli nge-pancreatitis.
Kuyasiza ukuthatha imifino emincane ebanzi bese uyibambisa. Kuhle nokubabhaka ehovini. Ngakho-ke izakhi ezilusizo zesitshalo sezimpande ziyagcinwa.
Umkhiqizo ophelile kufanele udliwe ngokuphelele ngesimo esichotshoziwe. I-grater noma i-blender izosiza ukuxazulula le nkinga.
Ukusetshenziswa kwama-beet ngendlela ebabayo yesifo
Izinto zezinto ezisebenzayo ezimpandeni zithuthukisa ukugaya ukudla, kepha i-fiber, eningi kakhulu kuma-beet, yenza kube nzima. Ngakho-ke, isitshalo sezimpande sihlukaniswa njengokudla okusindayo.
Uma umuntu ehlaselwe yi-pancreatitis, ushesha ngokwezokwelapha, futhi ngaphambi kokuxolelwa noma yikuphi ukudla kufakwa kwimenyu ngokucophelela nangezilinganiso ezincane. Isikhombisi esibalulekile ukuthi kuyazicasula yini izindonga zesisu noma cha.
IBeetroot akuyona umkhiqizo ovunyelwe. Ngenkathi yokwanda kwe-pancreatitis, ingashuba isimo futhi inikeze isisekelo sokuqalisa kokuvuvukala.
Ukusetshenziswa kwama-beet ngendlela engapheli
Konke kuhlukile uma i-pancreatitis inefomu elingamahlalakhona. Kungenzeka yini ukudla ama-beet abilisiwe ngalesi sigaba salesi sifo? Kulokhu, imifino iyingxenye ebalulekile yemenyu yesiguli.
Isitshalo sezimpande siphekiwe. Ngokuchayeka okushisayo, iba wusizo kumanyikwe. Ngokuthola ukuthungwa okubucayi, imifino iyeka ukuthukuthela esiswini.
Ngaphambi kokudla, kuyadingeka ukugaya ama-beet abilisiwe ku-grater. Noma, uma ufuna ukuthola amazambane abunjiwe, dlulisa umkhiqizo ngo-blender.
Ungadli izitsha lapho imifino inqunywe ku-cubes. Ngesikhathi sokugaya, izingcezu ezinjalo zilayisha ngokungalingani i-gland, ngenxa yalokho, lesi sifo singanda. Isaladi yeBeetroot kufanele isulwe.
Ukudla ngaphezu kwama-gramu ayi-100 womkhiqizo ngosuku kuvinjelwe.
Ijusi leBeetroot liyigumbi lamavithamini namaminerali. Kepha kungenzeka nge-pancreatitis? Odokotela bayakwenqabela ukuyiphuza ngesikhathi sokuqhuma kokuvuvukala kwe-glandular. Kungaleso sizathu kunconywa ukuthi ijusi:
Inani elikhulu le-asidi ekwakhiweni kwemifino kuvuselela ulwelwesi lwama-mucous futhi lukhuphule i-acid esiswini.
Ukwanda kokukhiqizwa kwe-secretion ne-hydrochloric acid, okuyingozi esigabeni esibi se-pancreatitis.
Ushukela ekwakhiweni kungaba nomthelela omubi ekukhiqizweni kwe-insulin, kusongele engcupheni yesifo sikashukela. Ukudla okuqukethe ushukela kuvinjelwe.
Ngomthamo omkhulu wejusi elidakiwe, ukufiphala kungenzeka, lokhu kungenxa yokwanda okukhulu kwengcindezi.
Imvamisa kukhona ukukhuphuka kwamathumbu nobuhlungu.
Lapho isifo somuntu sesivele sesimweni esingamahlalakhona, ijusi le-beet lingadakwa, kepha ngokucophelela, kulandela ukusabela komzimba. Uma kwenzeka wephula ukukhiqizwa kwe-insulin noma umsebenzi wamathumbu, isiphuzo sikhanseliwe.
Ijusi yesiguli kufanele ilungiselelwe ekhaya ngokuzimela, hhayi ithengwe esitolo.Kugcinwa izithako zokugcoba emithanjeni yamabhungane ahlanganisiwe, futhi azemukelekile ukuvuvukala kwamanyikwe.
Ungapheka kanjani futhi uphuze ujusi we-beetroot
Kunezimfihlo eziningi zokugwema ukulimaza futhi uthuthukise umphumela omuhle wesiphuzo:
Ijusi le-beet elisanda kufakwa, lifaka emakhazeni amahora amabili, lehlisa umsebenzi wezakhi zalo, ngaleyo ndlela lithuthukisa ukusabela kwesisu kulo.
Kuyasiza ukufaka ijusi yeminye imifino, efana namathanga noma izaqathe, esiphuzweni.
Kufanele ngaso sonke isikhathi uqale ngenani elincane, kancane kancane ulakhe futhi ulandelele inhlala-kahle yakho.
Ungatusi ukuphuza ngaphezu kwe-50 ml ngosuku.
Ijusi ayilungele ukufakwa kwansuku zonke ekudleni. Odokotela batusa ukuyiphuza kabili ngesonto.
Kungani ama-beets elungile
Njengoba wazi, lezo ziguli ezihlushwa i-pancreatitis zinokuphazamiseka okuhambisana nesistimu yokugaya ukudla. Kunemikhiqizo enomthelela onqenqemeni enqubweni enje, ngenxa yalokhu kuholela ekwandeni kwesifo kanye nobuhlungu obukhulayo esiswini. Ukugwema lokhu, kubalulekile ukukhipha ukudla okuthile ekudleni.
Ngingadla ama-beet aphethwe yi-pancreatitis? Akunakusho ukuthi kufanele udle imifino eluhlaza. Ngaphezu kwalokho, odokotela abaningi bavumile ukuthi ngezifo ze-gland, kuvunyelwe ukudla ama-beet abilisiwe.
Ukusebenziseka kwemithi yendabuko yale mifino ukuthi ngemuva kokupheka, ukuhambisa, izindawo ezinenzuzo zamabheji azilahleki, ngaphandle kwamavithamini C, B5, B6.
Kwimifino ebomvu kukhona:
amavithamini - B1, B3, B5, B6, PP, E, C,
Futhi emifino kunensimbi eningi. Ngokwokuqukethwe kwensimbi kuyo yonke imikhiqizo yezitshalo, ama-beet athatha indawo yesi-2nd ngemuva kwegalikhi.
Lapho isisu sibuhlungu, izitsha ze-beetroot ezine-gastritis zinomphumela omuhle ekwakhekeni kwalesi sifo, ngenxa yezakhiwo ezithile ezizuzisayo zama-beet.
Amathumbu asulwa ubuthi nangobuthi.
Ingcindezi yegazi ijwayelekile.
Ukuhlanzwa, ukwelulwa kwemikhumbi nezindonga zama-capillaries kuyenziwa.
Khipha amanzi ngokweqile emzimbeni.
Inomphumela omnene we-laxative ne-diuretic.
Futhi, ama-beet abilisiwe nge-pancreatitis, kanye nezinye izinto ezengeziwe, kuhloswe ngawo ukunikeza umphumela wokupholisa amanxeba ngaphakathi emzimbeni (isilonda sesisu).
Izici eziwusizo zemifino nomphumela wazo emzimbeni womuntu
IBeetroot yaziwa ngezakhiwo zayo zokuphilisa, imiphumela ezuzisayo ezinqubweni ze-pathological. Inzuzo yayo enkulu okuqukethwe okuphezulu futhi okuhlukahlukene kwezakhi eziwusizo, inani lazo elihlala lingashintshiwe ngisho nangemva kokulashwa kokushisa.
Kungumthombo we-betanine (kuthuthukisa ukwakheka kwegazi), i-curcumin (inomphumela we-analgesic), i-fiber (i-normalize izinqubo ze-metabolic).
Ngaphezu kwalokho, ukwakheka kuqukethe amavithamini wamaqembu A, B, C, PP, izinto ezincane nezinkulu, njenge-calcium, potassium, zinc, manganese, iodine, iphosphorus, ithusi, i-iron, i-sodium.
Ama-beet awusizo nganoma yiluphi uhlobo, kepha ezifweni zohlelo lokugaya, ama-gastroenterologists ancoma ukuwasebenzisa ngendlela ebilisiwe noma ebhakwe.
Yini ukusetshenziswa kwama-beet:
ishisa amanoni, icindezele isifiso sokudla, isebenze izinqubo ze-metabolic, isiza ukwenza ngokwejwayelekile isisindo,
ithuthukisa i-hematopoiesis, isheshise ukugeleza okujwayelekile kwe-lymph, ivimbela ukuthuthukiswa kwe-pathologies yehliziyo,
yenza buthaka izinhlungu, ibe nomphumela ozuzisayo esimweni sezicubu zemisipha,
kwehlisa umfutho wegazi ophakeme
ilusizo kwabesifazane esikhathini sokuya esikhathini, njengoba kusiza ukubhekana nezimpawu ze-anemia: ubuthakathaka, isiyezi, ukwanda kokungabekezeleli, ukunganaki,
iqinisa futhi isekele amasosha omzimba womuntu,
ihlanza umzimba: isusa ubuthi kanye nemali enosawoti,
kunxephelela ukushoda kwe-vithamini A, B, C, ama-macronutrients,
ikhuthaza ukuphulukiswa kwesilonda se-peptic,
inezici ze-diuretic: igcina uketshezi ku-renal tubules futhi inyuse umthamo womchamo,
ivuselela isenzo sokusebenza komzimba wamathumbu (motility laxative),
kusiza ukumuncwa kwezakhi zomzimba, kusiza ukugaya, kuthuthukisa ukusebenza kwepheshana lesisu.
Ukuze uzuze umphumela omuhle, kubalulekile ukusebenzisa imifino ngokuhlelekile. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa njalo kwempande ekudleni kuthuthukisa isimo esijwayelekile sabantu abanezinkinga ze-thyroid, abahlushwa ukuqunjelwa okungapheli, isifo sokuqina kwemithambo yegazi.
Ama-beet nawo awusizo ngesikhathi sokukhulelwa, ikakhulukazi ezinyangeni ezintathu zokuqala, ngoba iqukethe i-folic acid emithini enkulu.
Siza! Okuqukethwe kwekhalori komkhiqizo ongavuthiwe kungama-kcal angama-43 nge-100 g. Ngenxa yokuqukethwe kwamavithamini amaningi nezinye izinto ezidingekayo emzimbeni, ungaphungula isisindo ngama-beet ngaphandle kokulimaza impilo yakho.
Kungenzeka yini ukuthi udle ama-beet angaphekiwe futhi uphuze ujusi we-beet
Ukugqugquzela izindlela zokwelapha i-pancreas futhi kunciphise ubunzima bezimpawu, kukhonjiswa ukudla okuyisipesheli kwiziguli kanye nokwelashwa kokulondolozwa. Ama-beetle aluhlaza kanye nejusi le-beetroot awela esigabeni sokudla esenqatshelwe.
I-raw beetle izosiza umuntu onempilo kuphela, kepha kubantu abane-pancreatic pancreatitis ingavusa ukwanda kwalesi sifo, ibe yisihlahlakali senhlala-kahle. Imicu yemifino yama-coarse, futhi iphakeme kakhulu ku-fiber, kunzima ukuyiqothula futhi imunce.
Kodwa ama-gastroenterologists ancoma ngisho nokufaka ama-beet aphekwe noma abhakwe ekudleni. Siphinda futhi ukuthi imifino ngemuva kokwelashwa okushisa ayilahlekelwa yizimpawu zayo zokunambitha futhi igcina cishe zonke izakhi ezilusizo nezakhiwo zokwelapha.
Ngingazidla nini izindebe ezine-pancreatitis
Akukalulekanga ukufaka ama-beet ekudleni esikhathini esibi kakhulu. Kulesi sigaba, isiguli sikhonjiswa indlala, futhi noma yikuphi ukudla kungalimaza umzimba, kuvuse ukuhlaselwa okusha kobuhlungu. Ama-beet abomvu abilisiwe avumelekile ku-pancreatitis engapheli ngaleso sikhathi lapho isifo sesixolelwa.
Basebenzisa imifino ngemuva kokwelashwa okufanele kokushisa, kuqala ngesipuni esisodwa, kancane kancane bakhulisa leyo ngxenye iye ku-100 g ngosuku ngaphezulu kwezinsuku eziningi.
Futhi kwenqatshelwe ukuphuza ujusi we-beet ngesikhathi se-acute, ngaphandle kokuthi ayinayo imicu yama-coarse. Okuqukethwe okuphezulu kwama-asidi noshukela kunomphumela omubi kwezicubu ze-pancreatic, kungavusa uhudo, isifo sohudo kanye nomfutho wegazi ophansi. Thatha ujusi we-beetroot enkambweni engapheli yesifo iqala ngesikhathi sokuxolelwa okuphikelelayo.
Ngaphezu kwalokho, kunconyelwa ukuyisebenzisa hhayi ngefomu yayo emsulwa, kepha uyihlikihle nenye ijusi yemifino (iklabishi, isanqante, amazambane). Isiphuzo kufanele sifakwe okungenani ihora, kufanele siphuzwe ngezikhathi ezithile ngemuva kwezinsuku ezimbili kuya kwezintathu. Izinga lansuku zonke akufanele lidlule ku-100 ml.
Kubalulekile! Uma ukusabela okunjalo okunjenge-nausea, ukugabha, izicubu ezikhululekile, ujusi we-beet kufanele kungafakwa ekudleni, ngoba kungaba wuphawu lokungezwani komzimba.
Amaresiphi wezitsha ezinhle kakhulu ngalo mkhiqizo.
Ama-beet asetshenziswa njengomkhiqizo we-standalone noma asetshenziswa njengengxenye yezitsha ezahlukahlukene. Kuyabiliswa, kufiwe, kubhakwe. Umkhiqizo oqediwe uqhekeka usebenzisa i-blender, grater, gaya ngokusebenzisa ngesihlungo - into esemqoka ukuthi okuvelayo kungukungaguquguquki kwe-mushy.
Cabanga izitsha ezithandwa kakhulu nayo, ezivunyelwe ngesikhathi sokuxolelwa okuzinzile.
Ukuze upheke, udinga imifino ephakathi nendawo engu-1-2. Sidlulisela i-beetwex emsulwa ebhodweni ngamanzi abandayo bese sipheka kuze kuthambe. Uma lezi yizithelo ezinkulu, bese usika kuqala izingcezu ezilinganayo ukuze ama-beet aphekwe ngokushesha. Isikhathi sokupheka esivamile singamahora ayi-1.5-2.
Ukulungela isheke ngemfoloko. Okulandelayo, imifino epholile iyabhekelwa bese isuswa emhlabathini ku-grater, enongwe ngamafutha zemifino, exutshwe. Ukuze uthuthukise ukunambitheka, ungangeza isanqante esincane esibilisiwe noma i-apula ngaphandle kwe-peel, futhi ochotshoziwe ku-grater enhle.
Bhaka kubhake bhotela
Ukuze uthole iresiphi sithatha imifino ephakathi ephakathi yefomu elifanele lombala omnyama ogcwele. Ngaphambi kokuqala ukupheka, vula ihovini engu-180-200 degrees ukuze kube nesikhathi sokufudumala kahle.
Ngalesi sikhathi, lungisa imifino:
Sisusa ukungcola ngaphansi kwamanzi agobhozayo, sinqume izeluleko nezimpande.
Ngaphandle kokucwilisa, uthathe izingcezu ezimbili.
Simboza isidlo sokubhaka (kungcono ukukhetha ngezinhlangothi) nge-foil, sisakaze ama-beet phezulu nge-slice phansi - ukuze uhhafu we-peel ungaphezulu. Thela amafutha omnqumo amaningi.
Mboza nge-foil bese ubeka kuhhavini imizuzu engama-30 ukuya kwengama-40. Isikhathi sokupheka sehlukile, kuya ngezinhlobonhlobo nosayizi wezitshalo zezimpande. Lapho nje imifino ithambile, isuse kuhhavini.
Sebenzisa ama-beets aqediwe njengesitsha esisehlangothini bese ulungiselela isaladi ngawo, futhi uma uthela isamba esincane s uju, uzothola isiphuzo esisebenzayo nesihlwabusayo.
Ithiphu. Ngasikhathi sinye ngamabhele, ngokufanayo ungabhaka eminye imifino: izaqathe, amazambane.
Nge-pancreatitis, i-beetroot iphekwe emanzini noma umhluzi wenyama olula, kuyilapho inyama uqobo ingadliwa.
Ngokusekwe epanini elinamalitha amathathu uzodinga:
Amabhetshu aphakathi nendawo ayi-2,
Utamatisi o-4 ovuthiwe ophakathi nendawo (uma omncane, bese kuba ngu-5-6),
imifino: iparsley, dill,
ubhontshisi kushukela wabo (uyazikhethela).
Uma ufuna i-beetroot enempilo futhi emnandi ngokwengeziwe, pheka kumhluzi wenyama wesibili. Kungcono uma ibele yenkukhu noma ithanga. Inkukhu yami, uthele amanzi, uthele umlilo omncane, ulethe ku-ngamathumba
Siphinda sihlanze inyama ngaphansi kwamanzi agobhozayo, sithululela amanzi ahlanzekile epanini, singeza iminwe emibili kuya kwemithathu ezansi, sipheke ukushisa okuphansi, susa is Foam ebangelwa yilokhu.
Ukuze kubhekwe Ukunikeza ukunambitheka esitsheni, ngemuva kokubilisa engeza ikhanda le-anyanisi ehlutshiwe, usike ngokuxhuma. Kungcono ukungasebenzisi usawoti nezinongo ukunambitha.
Ngenkathi umhluzi uphekwe, lungisa imifino. Izaqathe ezintathu ezihlutshiwe ku-grater, u-anyanisi uthathe ama-cubes amancane. Epanini elishisayo ku-1 tsp. amafutha emifino phezu kokushisa okuphakathi, govuza u-anyanisi kuze kube sobala, engeza izaqathe, bese ubila eminye imizuzu engama-2-3.
Sika i-beetroot ibe yimichilo emincane yokuzikhethela, siyigaye nge-grater noma isebenzisa i-blender. Lapho umhluzi ubilisiwe, engeza yonke imifino ngasikhathi sinye, upheke kuze kuthambe. Ekupheleni kokupheka, kufanele uthole u-anyanisi wonke kusuka kusobho, ufafaze ngamakhambi. Gcwalisa ukukhonzwa kwe-1 tbsp. i-nonfat ukhilimu omuncu.
Kukhona iresiphi eyenziwe lula ye-beetroot, engasinambitheki kangako. Thela amazambane oqoshiwe no-anyanisi emanzini abilayo, ama-beet asikiwe kanye izaqathe ku-grater, upheke kuze kuphekwe imizuzu engama-30-40. Isizini ngamakhambi. Uma ufisa, engeza u-1 tbsp l ukhilimu omuncu onokuqukethwe okuphansi kwamafutha.
IBeetroot yezifo zepheshana lesisu ayivunyelwe kuphela, kodwa futhi iyadingeka. Ixazulula izinqubo ze-metabolic, isusa ubuthi kanye nobuthi, iqinisa amasosha omzimba, inomthelela omncane wokuwohloka komzimba nokuqina.
Kodwa-ke, ukuze ungalimazi umzimba futhi ungakhuli lesi sifo, kunconywa ukusebenzisa ama-beet aphethwe i-pancreatic pancreatitis ngemuva kokwelashwa okushisa. Uma ukhombisa umcabango, khona-ke ama-beets amasha abilisiwe noma abhakwe angaphenduka kalula abe isaladi elimnandi, isidlo esiseceleni noma uphudingi. Jabulela isidlo sakho futhi ube nempilo!
Nge-pancreatitis, kungenzeka noma ungayidli imifino? I-Beetroot ku-pancreatitis iyelulekwa ukuba ithathwe ngodokotela njengokudla kokudla okukhona. Ukudla okunjalo kweziguli kungenxa yokuthi iodine iqukethe esithelweni sezimpande, esiza ukubuyisela umsebenzi we-pancreatic ku-pancreatic pancreatitis.
Ama-beet abilisiwe noma afakiwe, ngakho-ke ukugayeka kwamavithamini kuzoba ngcono. I-Fibre ilahle ingxenye yayo, ngakho-ke ukugaya kuzoba lula.
Kubalulekile ukuthi i-pancreatitis isilungiselele kahle isivuno sezimpande.
Ukuze ulondoloze izinzuzo zesitshalo sezimpande, usebenze ukugaya esiswini, kubalulekile ukunamathela kuma-nuances athile wokupheka.
Geza umkhiqizo kahle ngaphambi kokuwubilisa. Isitshalo esiyimpande siphekwe ngaphansi kwesembozo esimboziwe okungenani amahora angama-2.
Pheka izimbotshana nge-peel yonke, unganqunywa ngesimpande esikhulu.
Akuvunyelwe ukwengeza i-acetic kanye ne-citric acid, i-kvass lapho upheka umkhiqizo emanzini. Yize abaningi besebenzisa le ndlela ukugcina umbala, esimweni se-pancreatitis, ama-beet abilisiwe abonisa ukukhohlisa lokho kuzodala ukuhlaselwa.
Ngaphambi kokusetshenziswa, ama-beet abilisiwe abekwa phansi ku-grater noma aphazanyiswe ku-blender ukuze kungabikho ukucasuka kwe-mucosa yegastric. Futhi ungabhaka ehovini, ngakho-ke izoba yi-juicier futhi ithambe.
Ukusetshenziswa kwama-beet in pancreatitis acute
Uma lesi sifo siba sesigabeni esibi, nikeza ukwelashwa ngokudla, okubandakanya ukwenqatshwa okuphelele kokudla. Ngemuva kwezinsuku ezingama-20, isiguli sidinga ukubuyiselwa ngokuphelele kwamavithamini namaminerali alahlekile. Lokhu, isiguli esine-pancreatitis sifakwa kancane kancane ngokudla okunama-khalori aphansi (imifino).
3Kwenqatshelwe ukudla ukudla okunamafutha, ngoba kunzima ukugaya nesisu namathumbu. Isitshalo sezimpande, ngaphezu kwezakhi ezisebenzayo zezinto eziphilayo, siqukethe i-fiber, okunzima ukuyigaya.
Lapho umzimba usuwumqemane ngokuphelele, ukudla okudla okutshaliwe kuyazuzisa. IBeetroot ithande ukuzimela okuguqukayo kwemisipha yekoloni. Isisu sisebenza ngemodi yemvelo, sigaya ukudla okudla kahle. Yize ngesimo esibi sesi sifo, isithombo sezimpande ngendlela entsha nesibilisiwe singadala ukonakala enhlalakahleni.
Ngakho-ke lapho kudliwa ama-beet ku-pancreatitis ebukhali, ngisho nemifino ebilisiwe ingadala ukungezwani kokukhiqizwa kwemikhiqizo yokudla, ngakho-ke, ngesikhathi sokuqhuma kwesifo, akunakwenzeka ukudla umkhiqizo nganoma iyiphi indlela ephekiwe.
Uma izincomo zikadokotela zingalandelwa, imifino izosenza isimo sibe yimbangela yokuvuvukala okulandelayo kwamanyikwe.
I-Beetroot ne-pancreatitis engamahlalakhona
Ukwelashwa kwe-pancreatitis engapheli yezindlala zesisu, kudliwe ukudla, okwenzelwe ukungena ngezigaba ekudleni ngemuva kokuqedwa kokuhlaselwa kwe-pathology.
Ukulandela imithetho yokucubungula umkhiqizo, ezigulini ezinesifo esingelapheki, kungeniswa ekudleni ngemali encane. Ekuqaleni, kuvunyelwe ukusebenzisa i-1 tbsp. l futhi ngokuhamba kwezinsuku eziningana, le ngxenye ilethwa kumagremu ayi-100.
Ingabe ama-beet abilisiwe aphethwe yi-pancreatitis? Ngefomu engapheli yesifo se-pancreatic, kunconywa ukudla umkhiqizo abilisiwe. Ngemuva kokupheka, ama-beet anomthelela omuhle esiswini.
Kodwa kusuka ku-vinaigrette, ene-pancreatitis, yenqaba. Ama-beetroot asikiwe kusaladi ekwebuleni kokugayeka azolayisha indlala futhi abangele ukukhukhumala. Umphumela womkhiqizo emzimbeni wesiguli onesigaba esingelapheki se-pancreatitis lapho uthathwa ngenani elhibhile uyathandeka.
I-adsorption yangaphakathi iyenzeka.
Inkambo ye-metabolic yamafutha iyalungiswa.
Isaladi yemifino ebilisiwe. Umkhiqizo ubilisiwe ikhasi ikhasi 2. Ngemuva kokupheka, ihlutshiwe bese ihlikihlwa ku-grater. Isaladi livunyelwe ukuvuthwa kusetshenziswa i-olive olive.
Isaladi ngama-beet, abhakwe kuhhavini, ngokufakwa kwamaqanda abilisiwe, ushizi, wokugqoka ukhilimu omuncu wezinhlobo ezinamafutha amancane. Ekuqaleni, imifino kufanele ibhakwe ku-foil. Isikhathi sokupheka amahora ama-2 emazingeni okushisa angama-180 degrees.Ngemuva kwalokho uthele amagremu angama-200 of ushizi, amaqanda ama-2 nemifino yezimpande ebhakwe. Hlanganisa zonke izithako kanye nenkathi ngo-ukhilimu omuncu.
Isobho lempande. Ngokukhetha umkhiqizo ku-grater, thumela ebhodweni lamanzi abilayo emifino ebunjiwe - amazambane, izaqathe kanye neklabishi. Bese ufake usawoti bese upheka okungenani imizuzu engama-40.
Izinzuzo zejusi le-beet
Ijusi lisiza kakhulu ukugaya njengomuthi onamandla we-laxative. Impahla efanayo yomkhiqizo kungenxa yokuthandwa kokuphuza ngokudla okuhlukahlukene.
Uma usebenzisa isiphuzo se- beetroot nge-pancreatitis, lokhu kuzosiza ekuhlanzeni umzimba, kuqede izimpawu zesifo ngenxa yomphumela we-laxative, kususe izinto ezinobuthi esibindini nasemithanjeni yegazi, kanye nalokho okufaka isandla ekwakheni isimila esibi.
Lapho umzimba uhlanzwa, kuba nokwanda kokugeleza kwegazi, ingcindezi iyancipha. Lapho uphuza, kukhona ukwanda kokungena kwegazi ungene ebuchosheni, inkumbulo nokuhlushwa kuyathuthuka. Futhi isiphuzo se-beetroot sibuyisela ngokushesha amandla aphelile ngemuva kombuso omude wokuphuza phakathi nesiteleka sendlala noma ngemuva kokugula.
Ijusi kudingeka ukuthi idakwe imizuzu engu-20 ngaphambi kokudla.
Ijusi elisanda kufakwa linokunambitheka okuthile futhi akubona bonke abantu abazoyithanda. Ngokwamukelwa okufanele, i-ejenti yokwelapha ayidakwanga inqunu. Nge-pancreatitis, ukulungiselela ujusi we-beetroot, hlanganisa namajusi agcobhoziwe avela kwimifino ehlukahlukene:
Isithako sikhethwe ngokuya ngezifiso zokunambitha. Isiphuzo se-beetroot esihlanganisiwe sinikezwa ngezinzuzo ezinkulu futhi sithola ukunambitheka okumnandi.
Ngesikhathi sokuxolelwa okuqhubekayo kwe-pancreatitis, isiphuzo isiphuzo, landela izincomo.
Ingxube idakiwe kungakadluli ihora ngemuva kokwenza kwayo.
Ijusi ingeniswa ekudleni kancane kancane.
Ukuphuza le ngxube kuvunyelwe izikhathi ezi-2 izinsuku eziyi-7.
Uma imiphumela emibi ivela ngemuva kokuphatha, njengokucanuzelelwa kwenhliziyo, ukugabha, ujusi, akusafanele ukuthi kudliwe.
Njengoba i-pancreatitis inhlobo ezimbili zesifundo, izimbangela nezimpawu zeziguli zizohluka, kubalulekile lapho wenza ukuxilongwa okufanele. Kubaluleke kakhulu ukuvakashela udokotela onesifo se-pancreatitis, okuthi ngemuva kokuhlolwa anikeze ukwelashwa okufanele.
Indima yemifino ku-pancreatitis
Ama-Beets abhekwa njengomunye wemifino ebaluleke kakhulu kumuntu ophethwe yi-pancreatitis. Ngokwesakhiwo sayo kunezinto eziningi ezidingekayo namavithamini wamanyikwe.
Isitshalo sezimpande siyadingeka ukuze kulondolozwe impilo yomuntu ophethwe yilesi sifo, ngoba:
iqukethe amavithamini we-B, amaminerali adingekayo ukwenza ngokwejwayelekile umfutho wegazi,
iqukethe i-betaine, ehlisa umfutho wegazi,
ilungisa imetabolism yamafutha,
ihlanza umzimba wobuthi nobuthi.
Ukwemukelwa kokuvuvukala okukhulu kwe-pancreatic
Ngokukhuculula lesi sifo, ochwepheshe abancomi ukuthi kungeniswe ama-beet ekudleni. Ngaphezu kwezakhi ezisebenzayo eziwusizo emzimbeni, amathambo e-coarse fiber akhona kwimifino, akhulisa umthwalo ohlelweni lokugaya ukudla. Esigabeni esibi se-pancreatitis, ukudla okunjalo kwesitshalo kungaholela ekuwohlokeni okubukhali esimweni sesiguli, ukuvela kwezinkinga eziseceleni, ngoba kuthinta kabi i-pancreas.
Ngefomu elibuhlungu, ukuthathwa kwama-beets aluhlaza kuyaphulwa, ukusetshenziswa okulawulwa kokubilisiwe kuyamukeleka.
Futhi kuphela lapho ukuhlaselwa sekususiwe ekugcineni, ukwamukelwa kwesitshalo sezimpande kuvunyelwe. Isibonelelo sansuku zonke akufanele singeqi i-1 tbsp. l Kancane kancane, yenyuselwa ku-100 g ngosuku, ngenkathi ibheka isimo sesiguli esangena ngaphansi kwalesi sifo esibuhlungu. Lapho kuvela uphawu olwethusayo, imifino iyasuswa masinyane ekudleni.
Ukwelashwa kwe-Beet pancreas
Ama-beet asetshenziselwa ukwelapha ama-pancreas. Ukuze uthole lokhu, umuntu ophethwe yi-pancreatitis udinga izitshalo zezimpande neziqongo ze-beet, okumele zigawulwe kahle noma zigayiwe. Umxube obangelwa kufanele udliwe amasonto amabili isigamu sehora ngaphambi kokudla.
Okokuqala udinga ukudla lo mkhiqizo kungadluli amagremu angama-20 ngosuku, khuphula kancane kancane ingxenye yawo ukuya kumagremu ayi-150.
Uma umuntu ene-gastritis ene-acidity ephezulu, imifino kufanele ibiliswe.
Ngingakwazi ukuphuza ujusi we-beetroot?
Ngesikhathi sesigaba esibuhlungu, ujusi we-beet for pancreas uyingozi. Kunezizathu ezithile zalokhu:
I-beetroot yandisa i-acidity, iyisimiso sokugaya ukudla,
kusebenze ukukhiqizwa okwandayo kwejusi yesisu, ama-enzyme,
iqukethe ushukela ongeke udliwe kuphula izimfihlo ze-insulin,
ujusi unciphisa kakhulu ingcindezi
kungadala izinhlungu zamathumbu.
Uma kwenzeka kuxolelwa ukuvuvukala kobuhlungu be-pancreas, kuvunyelwe ukuphuza isiphuzo se-beetroot, okufanele siphungulwe nezinye iziphuzo ezivela emifino. Noma kunjalo, kunemithetho yokudla ujusi we-beetroot:
ungaphuza isiphuzo esisanda kulungiswa (kufanele sime amahora amabili kuya amathathu),
udinga ukwethula isiphuzo ekudleni kancane kancane,
uma kunobuhlungu, isicanucanu, ukugabha, kufanele uyeke ukuphuza,
ukudla isiphuzo se-beetroot akuvunyelwe ngaphezu kwesisodwa kanye noma kabili ngesonto.
Ama-beet ekudleni ngezigaba ezahlukahlukene zokuvuvukala kwe-glandular
Ngesikhathi sesigaba se-pancreatitis esibuhlungu kakhulu, ama-beet angadliwa, ngoba angadala ubuhlungu.
Ngesikhathi sefomu elingamahlalakhona, ogulayo uvunyelwe ukudla ama-beets ngezingxenyana ezincane ngefomu elibilisiwe, elibhakwe noma elinomusi.
Kodwa-ke, kufanele ulandele imithetho yokupheka ama-beet abomvu nge-pancreatitis:
Ukupheka ama-beet okungenani amahora amabili,
Imifino enkulu yezimpande yokupheka idinga ukusikwa ibe izingxenye eziningi,
Imifino ayikwazi ukubiliswa uviniga, ulamula, i-kvass emuncu, i-citric acid,
Ukuze isetshenziswe ekudleni, ama-beet kufanele asikwe kahle,
Ukuze upheke futhi ubhake, ama-beet akadingi ukuthi ahlolisiswe,
Amandla ngesikhathi sokupheka, imifino yokubhaka kufanele ivalwe.
Ama-raw ama-raw awadliwa yi-pancreatitis egulayo. Njengoba isivuno sezimpande singacasukisa ipheshana esiswini, yenza kusebenze ukukhiqizwa kwama-enzymes we-pancreatic.
Isobho elinemifino isidlo esinempilo futhi simnandi kakhulu. Ukuyipheka, udinga ama-beets ayi-3 asayizi aphakathi nendawo, izaqathe, u-anyanisi, utamatisi - izingcezu ezi-2 inye. Iresiphi yesobho le-beetroot yemifino ngokuvamile ilula:
Sula bese ubhula yonke imifino.
Sika ama-beet kanye nezaqathe ube yimichilo emincane noma i-kabela ku-grater eyi-coarse. Cola u-anyanisi kahle.
Faka ama-beet ebhodweni ngamalitha ama-3 amanzi, uthele umlilo omncane.
Dlulisa u-anyanisi oqoshiwe nge izaqathe epanini ngenani elincane lamafutha zemifino imizuzu eminingana. Faka ingxube edonswayo ephoqiwe epanini lapho kuphekelwa khona izindebe.
IBeetroot iphekwe ngomlilo ophansi kuze kube yilapho imifino ithambile ngokuphelele.
Ekupheleni kokupheka, engeza usawoti omncane kokuqukethwe kwepani, imifino ebunjiwe (dill, iparsley), vala isivalo, ucime isitofu ngemuva kwemizuzu emibili, bese ushiya isobho eminye imizuzu embalwa.
Khonza lesi sidlo kaningi ukudla kwasemini. Ungangeza kuyo isipuni sikakhilimu omuncu ophansi.
Ngokusho kwezinye izindlela zokupheka, kunconyelwa ukufaka ubhontshisi obhontshisiwe ku-beetroot, kepha lokhu akunconyelwe i-pancreatitis. Ubhontshisi uqobo ngokwawo awufakwanga ohlwini lokudla okuvunyelwe kwezifo ezinzima futhi ezingalapheki zepancreas, futhi ngokulondolozwa, kusetshenziswa izinto eziningi eziyingozi ezithinta kabi zonke izitho zesistimu yokugaya ukudla: ukunambitheka, izithako zokuvikela izithako, izithambisi zinambitheka.
IBeetroot ene-pancreatitis ne-cholecystitis
Ukufakwa kwama-beet ekudleni kwe-pancreatitis ne-cholecystitis kunconyelwa odokotela. Udinga ukusebenzisa imifino kuphela esimweni esisetshenzisiwe (kubhakwe noma sibilisiwe), ngesikhathi sokuxolelwa kwezifo. Akufanele usebenzise amasaladi ngama-beet, lapho imifino inqunywa izingcezu ezinkulu. Ukusetshenziswa kwezilimo ezimpandeni kunomthelela ekuvuseleleni ngokushesha kwezitho ezithintekile, kunomthelela wokuwohloka futhi wokuphefumula, kusebenze ukuqedwa kobuthi nobuthi emzimbeni.
Ama-beet abomvu abhakwe kawoyela awusizo olukhulu. Izitshalo ezintathu ezincane zezimpande kufanele zikhethwe, zigezwe kahle, zinqume iziqongo nezimpande (onke ama-nitrate afakelwe lapho).
Ngaphandle kokususa i-peel, izitshalo zezimpande zigawulwa zibe izingxenye ezimbili bese zifakwa ngamafutha omnqumo. Kubekwa i-foil kulolu hlobo lokubhoboza, bese kubekwa izimbotshana phezu kwalo ngosiki phansi. Mboza imifino nge-foil ngaphezulu bese uthumela kuhhavini imizuzu engama-50. Ukulungela kuyahlolwa ukubhoboza ama-beet ngemfoloko. Kufanele ingene kalula kwi-pulp ye-beet.
Ama-baked bakedated ahlanganisiwe ku-grater enhle yindlela enhle yokudla yeziguli ezinepancreatitis.
Lapho uhlanganisa imenyu yomuntu siqu, udinga ukubonana nodokotela nge-gastroenterologist. Lokhu kuzosiza ekugwemeni ukwanda kwesifo. Kuyadingeka ukukhetha imikhiqizo yokudla oyidlayo, udle inani elincane futhi ungasebenzisi kabi ukudla okungenamsoco.